Macalinkii hore kooxaha Man U iyo Everton David Moyes oo la filayo inuu dib ugu soo laabto shaqada leylinta kooxaha | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Macalinkii hore kooxaha Man U iyo Everton David Moyes oo la filayo inuu dib ugu soo laabto shaqada leylinta kooxaha
Macalinkii hore kooxaha Man U iyo Everton David Moyes ayaa la filayaa inuu dib ugu soo laabto shaqada leylinta kooxaha isagoo markaana lala xiriiriyey kooxda dalka Spain ee Real Sociedad.
kooxda Spanishka ah ayaa ceyiray tababaraheedii Jagoba Arrasate Axadii markii ay garaacday kooxda Malaga kulankii Horyaalka laliga ee Sabtidii dhacay,waxayna iminka doonayaan ineey wada hadalo la furaan Hogaamiyihii hore kooxaha Manchester United iyoEverton Moyes kaasi oo iminka ku sugan dalka Qatar, isagoo kamida shaqaalaha Tv-ga BeIN Sports,laakiin uu doonayo inuu Tababarenimada kusoo laabto.
laakiin 51-sano jirkaan reer Scotish ayaa la aaminsanyahay iinuu si fiican uga fiirsan doono meesha kale ee uu shaqada ka bilaabayo kadib mudo 10-bilood oo uu hayey kooxda Man Utd oo markii danbe laga racdeeyey Old Trafford.
United ayaa difaacaneysay horyaalnimada Premier League markii uu imanayey Moyes,laakiin waxaa uu ka tuuray kaalinya 7-aad ee kala horeynta sidaa oo ay ku waayeen booska Champions League markii ugu horeeysay tan iyo xili ciyaareedkii 1995-1996.
United ku qasaartay kulankii Swansea City wareega sadexaad ee FA Cup, sido kale Sunderland semi-finalka League Cup iyo Bayern Munich oo ku reebtay quarter-finalka Champions League.
Moyes ayaana la ceyriyey bartamihii bishii April 2-0 kaga adkaatay kooxdiisii hore ee Everton waxaana markaasi bad baado ahaan loogu dhiibay Giggs,iyadoo iminka uu joogo Louis van Gaal oo lacag badan kusoo adeegtay misana jaha wareer ku bilowday.